Ciidamada ammaanka qoryooley oo qabtay dad hilib Waraabe ka ganacsanayay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Ciidamada ammaanka qoryooley oo qabtay dad hilib Waraabe ka ganacsanayay
Ciidamada ammaanka qoryooley oo qabtay dad hilib Waraabe ka ganacsanayay
Laamaha Amniga Degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay howlgal ay ka sameeyeen suuqyada degmadaas ay gacanta ku soo dhigeen Shakhsiyaad Hilibka Waraabaha ku dhex iibinayay Gudaha Suuqa degmada Qoryooleey si qarsoodi ah, iyagoo ku dhex qariyay Hilbka Xoolaha.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Ammaanka degmada Qoryooleey ayaa warbaahinta gudaha u soo bandhigay Hilibka Waraabaha iyo Shaqsigii ka Ganacsanayay oo kamid ah dadka kunool degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Amniga degmada Qoryooleey Ibraahim Hadaafow ayaa sheegay in Ciidamada Ammaanka oo heegan kujiray ay dhacdhadaan ka warheleen ka dibna ay bilaabeen howlgalka gacanta loogu soo dhigay Hilibka waraabaha iyo dadkii kaganacsanayay.
Guddoomiyaha degmada Qoryooleey Sayid Cali Ibraahim Xasan ayaa dhankiisa Ciidamada Ammaanka ku bogaadiyay howsha ay bulshada u hayaan iyo sida ay mar waliba ugu jiraan ilaalinta amniga iyo badqabka Shacabka.
Waxaa uu Shacabka ku nool degmada Qoryooleey iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ka dalbaday inay la Shaqeeyaan Ciidamada Amniga.
Dadweynaha ku nool degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa saacadihii la soo dhaafay aad u hadal haayay Hilibka Waraabaha oo la sheegay in lagu iibinayay Kawaanka degmada, iyagoona hadda shaki weyn ka muujiyay hilibka halkaas lagu iibiyo.
Previous articleCOVID19 oo murugo ku beeray kala bar dhallinyarada
Next articleFaahfaahin ka soo baxaysa qarax ciidamo AMISOM lagula eegtay Shabeellada Dhexe